China yekufambisa neyekushanya indasitiri inoratidza kupora kwakasimba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » China Kuputsa Nhau » China yekufambisa uye yekushanya indasitiri inoratidza yakasimba kupora
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
China yekufambisa uye yekushanya indasitiri inoratidza yakasimba kupora
Kudiwa kwekuzorora kweguta, zororo mumasabhabha, nzendo dzemhuri uye nzendo dzekufunda zvakaratidza yakasimba kukwira maitiro
Chikamu chekushanyirwa cheChina chakataura huwandu hunokurudzira panguva yeZororo reMutambo
China indasitiri yendege inofambisa ingangoita mamirioni makumi maviri nemakumi mairi nemaviri ekufamba kwevagari muna Kukadzi
Kuwedzera kubhuka kwehotera kuri kuratidzawo kuda kwevanhu kufamba
Sekureva kwedata kubva kuChina Tourism Academy, chikamu chenyika chekushanya nekushanya chakaratidza kusimuka zvakasimba kusvika parizvino gore rino uye chiri kutarisirwa kuenderera mberi nesimba rayo parizvino sezvo China ichirerutsa nekusimudza zvirambidzo zvekufamba nekuda kwenzvimbo yakatsiga yemakona.
Chikamu chekushanyirwa cheChina chakazivisa huwandu hunokurudzira panguva yeZororo reMuchirimo pakati paKukadzi, nemari yekushanya yekumba ichinyora gore-ne-gore kukura kutanga kubva pazuva rechitatu rezororo revhiki, nepo huwandu hwevashanyi vari kuenda nekudzoka kubva kuvashanyi vakuru nzvimbo senge Guangdong, Shanghai neBeijing dzakapfuura kana kupotsa dzasvika pamatanho anoonekwa panguva ye2019 Spring Festival.
Kudiwa kwekuzorora muguta, zororo mumasabhabhu, nzendo dzemhuri uye nzendo dzekufunda zvakaratidza kukwira kwakasimba, akadaro chikoro.
Indasitiri yenyika yekufambisa ndege yakabata angangoita mamirioni e23.95 munaFebruary, kusvetuka kwe187.1 muzana gore pagore, data rekupedzisira kubva kuCivil Aviation Administration yeChina rakaratidza.
Kufamba nendege kwakatora mhepo nguva pfupi yapfuura zororo, panguva iyo vanhu vazhinji vekuChina vakasarudza kugara vakaisa mukana kudanho rehurumende rekudzivisa kuungana kusiri madikanwa.
Traffic yevafambi pamigwagwa yepamba yadzokera padanho rinoonekwa panguva imwechete mu2019, zvinoenderana nedatha kubva kune vanopa online vafambi vevashandi.
Kuwedzera kubhuka kwehotera kwakaratidzawo kuda kwevanhu kufamba. Sanya, Wuxi naLhasa vari pakati pevashanyi vanofarirwa nzvimbo dzekumba.
Huwandu hwekuchengetwa kwehotera muna Chivabvu 1, zuva rekutanga rezuva rechishanu reMay Day, rapfuura huwandu kubva pazuva rimwe chetero muna 2019, data rakaratidza.
Beijing yasunungura COVID-19 zvirambidzo sezvo guta guru reChinese rakaona pasina nyaya nyowani dzinotapuriranwa munharaunda kweinopfuura mwedzi.
Avo vanofamba kubva kunzvimbo dzine njodzi dzedzimba uye vachisvika muBeijing havafanirwe kupa zvisina kunaka nucleic acid bvunzo, uye tekisi nepamhepo mabasa ekurumbidza mota pakati peBeijing nemamwe maguta anotangazve.
Kuongororwa kwetembiricha kuchavewo kusingakoshi pamasuo enharaunda nemisha, nepo mukati nekunze kwetsika nenzvimbo dzevaraidzo dzakadai semapaki, nzvimbo dzinoyevedza, maraibhurari, mamuseum uye dzimba dzemitambo zvichabvumidzwa kubata zvinosvika makumi manomwe nezvishanu kubva muzana zvevashanyi vanokwanisa.
Dhata yakaratidza kukwira kwemhepo uye chitima tikiti kubhuka mukati nekubuda kweBeijing nekukurumidza mushure mekuziviswa kubva kuhurumende yemaspala.
Vemukati maindasitiri vakati vanhu vari kushandisa zororo riri kuuya kuti vagadzirire nzendo dzavakarasikirwa kare.
Mari dzekufamba, pekugara uye matikiti ekupinda kunzvimbo dzetsika nevaraidzo dzakadzikira zvakanyanya kubvira pakatanga COVID-19, uye dzimwe hurumende dzemuno dzinogona kuenderera dzichipa mavhoti ekufambisa kukwezva vashanyi, zvichibvumira vanhu kutora zororo rine mutengo mukuru gore rino.
Sekureva kwemishumo yazvino, inofungidzirwa huwandu hwemabhiriyoni e4.1 nzendo dzevashanyi vekumba dzinozoitwa kuChina gore rino, kukwira 42 muzana kubva 2020.
Mari yekushanya yemumba inotarisirwa kuwedzera makumi mana neshanu muzana kuti isvike 48 trillion yuan (ingangoita 3.3 bhiriyoni emadhora ekuUS).
Kukura kwehupfumi kweChina kwakaunganidza hutu mumwedzi miviri yekutanga ya2021, iine zvikwangwani zvakakura zvehupfumi senge kuburitswa kwemaindasitiri, kutengesa kutengesa uye kugadziriswa kweaseti-zvese zvinowedzera kupfuura makumi matatu muzana, maererano nedata rakaburitswa neNational Bureau of Statistics nhasi.